Njodzi yechisikigo: chii icho, hunhu, zvikonzero uye mhando | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 14/07/2021 11:25 | Mamiriro ekunze
Pasi redu pane njodzi dzakawanda dzezvakatipoteredza dzatinofanira kufunga nezvadzo nekuti mhedzisiro yadzo yakanyanya. Zvayo ndezve njodzi dzinongoitika dzoga. Izvo zvinowanzoitika zviitiko zvinokanganisa hupenyu nevanhu nenzira yakasarudzika uye zvinonyanya kukonzerwa nezviitiko zviri kuuya pasina kupindira kwevanhu. Muzviitiko zvakawanda, munhu ane basa rekukanganisa mhedzisiro yemhedzisiro yakaipa, kungave kwehunyanzvi kana kuronga kwakaipa.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza kuti njodzi dzenjodzi chii, hunhu, mhedzisiro uye mienzaniso.
1 Chii chinonzi njodzi yechisikigo
2 Mhando huru
4 Mhando dzenjodzi dzinongoitika dzoga
Chii chinonzi njodzi yechisikigo
Njodzi dzinongoitika dzega zviitiko zvinoitika pasina kupindira kwevanhu, izvo zvinokanganisa hupenyu nevanhu. Muzviitiko zvakawanda, vanhu ndivo vanokonzeresa mhedzisiro yekusavimbika kwehunyanzvi, kushaya hanya, kana mhedzisiro yezvirongwa zvakaipa.
Zvinoenderana nemhando dzezviitiko zvakasikwa zvichikonzera njodzi dzakabatana, kune zvikonzero zvakawanda zve njodzi dzinongoitika dzega. Kazhinji, njodzi yechisikigo iri inokonzerwa nemamiriro ekunze zviitiko, geomorphological maitiro, zvipenyu zvinhu kana nzvimbo zviitiko. Izvi zviitiko zvinoonekwa senjodzi kana zvasvika pakunyanyisa. Njodzi dzinongoitika dzine chekuita nemamiriro ekunze dzinosanganisira madutu anopisa, mafashama, kusanaya kwemvura, moto wesango, madutu, mafungu ekupisa, uye mafungu anotonhora. Kune rimwe divi, isu tine njodzi dzenzvimbo idzo dzakanyanya kushomeka kupfuura zvazvinoita meteorites nema asteroid.
Njodzi chiitiko chinoitika munguva pfupi, kazhinji hachizivikanwe uye chinokanganisa hupenyu. Njodzi dzinogona kuitika zvakasikwa, zvichikonzerwa nezvinhu zvevanhu, kana kukonzerwa nezvose zvakasikwa uye zvinhu zvevanhu.
Kana chiitiko, zvakananga kana zvisina kunangana, ine mhedzisiro yakaipa pavanhu, inova njodzi. Kana chiitiko chikaitika pasina kupindira kwevanhu, chinotorwa sechisikigo mune mavambo. Iyi pfungwa yeanthropic mune vanhu inowanikwa sezvinhu zvisipo kunze kwechisikigo. Nenzira iyi, munhu anosiyanisa pakati pezviito zvake nemhedzisiro yakatorwa kubva kune zvimwe zviitiko mudenga.
Pakati pezvikonzero zvinokonzeresa idzi njodzi tine zvinotevera:
Mamiriro ekunze anokonzera: zvinoitika nekusiyana kwemamiriro ekunze maererano netembiricha, kunaya kwemhepo, mhepo, kumanikidzwa kwemuchadenga, nezvimwe. Kazhinji izvi zvinongoerekana zvachinja muzvinhu zvemuchadenga zvinokonzeresa zviitiko zvakadai sedutu, dutu remagetsi, chamupupuri, mafungu echando kana kupisa.
Zvinokonzera geomorphological: zvinowanzoitika kana kufamba kwema tectonic mahwendefa nemasimba epasi nejasi achikonzera kudengenyeka kwenyika, tsunami uye kuputika kwemakomo.
Zvinokonzera zvipenyu: kusaenzana mune zvisikwa zvinogona kutungamira mukukura kwezvipembenene zvipenyu uye avo maveji. Nenzira iyi, kukura kwebhakitiriya nemavirusi kunogona kugadzira denda kana chirwere.
Kunze nzvimbo: Mameteorite uye maasteroid anopinda mumhepo yepasi anogona kukonzera kukuvara kwakanyanya.
Mhando dzenjodzi dzinongoitika dzoga
Chero chiitiko chinokanganisa zvakanyanya mwero chinoonekwa senjodzi yechisikigo. Ngatione zvavari:
Avalanche: iko kudonha kwemahombe hombe echando nenzvimbo ine mawere nekuda kwemhedzisiro yegiravhiti. Kana zvikaitika munzvimbo dzinogara kana kufambwa nevanhu, zvinogona kutungamira kunjodzi huru.
Tropical dutu: Iwo ari mhepo dzinotenderera dzakakura kwazvo. Madutu aya anoperekedzwa nemvura inonaya zvikuru uye nemhepo inomhanya zvikuru. Mhepo dzinogona kukonzera kusagadzikana mugungwa, mafashama, kuparadza zvivakwa uye zvinogona kukonzera kufa kwevanhu.
Ground nemasiraidhi: Iko kufamba kwakafanana neyakawandisa asi iine nzvimbo dzinotsvedza dzenyika kwakadzika chaizvo. Inowanzoitika nekuda kwekunaya kukuru uye kwenguva refu kunozadza ivhu nemvura uye kunokonzera kukoromoka. Izvo zvinogona zvakare kuitika nekuda kwekuvapo kwekudengenyeka kwenyika.
Epidemics uye pandemics: zvirwere zvinotapukira zvinogona kukonzera matambudziko makukutu. Zvirwere zviri kupararira nekutapukira uye zvinogona kukonzera denda.
Kuputika kwemakomo: uku ndiko kudzingwa kukuru kwemagma, madota uye magasi anobva mupfeko yeNyika. Iyo magma inopinda mukuyerera kunopinda nepasi pevhu uye kupisa zvese zviri munzira yayo.
Rumbidzai: chimvuramabwe chine hurema ine 5-50mm mvura yechando yemvura inonaya inogona kukanganisa uye kukonzera kukuvara kwakanyanya.
Meteorite uye comet zvinokanganisa: hazviwanzo kuitika asi zvinogona kukonzera kukuvara kwakakomba. Iyo meteorite idiki remudenga muviri wakaenzana nemamita makumi mashanu muhupamhi.
Moto wesango: Moto mukuru wemusango wakagadzirwa nevanhu, kunyangwe mazhinji achiitika zvakasikwa. Kusanaya kwemvura kwakanyanyisa kunogona kupisa huswa hwakasviba uye kutanga moto.
Mafashama: Dzinogadzirwa nekufashukira kwenzizi huru nemadhamu kana paine mvura yakawanda. Iyo yakareba butiro inogona kuparadza zvigadzirwa, kudhonza mhuka nevanhu, kudzura miti, nezvimwe.
Kusanaya: Iko kusavapo kwemvura kwenguva yakareba uye kunotevera kupisa kwakanyanya. Zvirimwa zvakarasika, mhuka dzinofa, uye vanhu vanomanikidzwa kubva munzvimbo iyi nenzara nenyota.
Kudengenyeka kwenyika: ivo vanotyiwa zvakanyanya nekuda kwekusafungidzira uye vanogona kuve nemhedzisiro yakaipa. Inogona kudonhedza chimiro, inokonzeresa kuputika, kutyora mapaipi emvura, madhamu nedzimwe tsaona.
Jecha neguruva madutu: zvinoitika munzvimbo dzakaoma uye semi-yakaoma. Kunyanya magwenga anokonzerwa nemhepo ine simba inodzinga jecha uye inoita makore anogona kukonzeresa kufa kwezvinhu zvipenyu nekuda kwekudzipwa uye kusvirwa.
Zvakaturikwa zvidimbu- Inokonzerwa nejecha uye guruva dutu uye inogona kuve inosemesa zvinosvibisa zvichikonzera zvakakomba kufema.
Dutu remagetsi: Izvo zvinoitika nekuda kwekuunganidzwa kweyakagadziriswa mweya unopisa uye wakanyorova uyo unopinda munzvimbo isina kugadzikana. Nekuda kweizvozvo, mheni nemheni zvinogadzirwa zvichiperekedzwa nemvura ine simba, mhepo uye kunyange chimvuramabwe.
Madutu: ndiko kuwedzerwa kwegore kunoumba koni yemhepo muchimurenga. Vanogona kuparadza zvigadzirwa, kukuvadza nzira dzekutaurirana uye kutyisidzira hupenyu hwemhuka nevanhu.
Tsunami: aya anonziwo mafungu emvura. Izvo zvinokonzerwa nekuvapo kwekudengenyeka kwepasi pemvura kunokonzera mafungu makuru anofamba nekumhanya kukuru. Nemhedzisiro pamhenderekedzo vanogona kuburitsa njodzi huru nekuda kwekukanganisa uye mafashama.
Heat wave: Inosanganisira yekuwedzera tembiricha kuwedzera kwedunhu riri pamusoro pevhareji iro rakajairwa nzvimbo imwechete iyi uye nenguva yegore. Kazhinji zvakanaka zvichiperekedzwa nekusanaya kwemvura.
Cold wave: iyo inopesana neiyo kupisa wave uye ivo vanowanzo kuperekedzwa neyakaipa mamiriro ekunze.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvekuti njodzi yenjodzi iri sei uye hunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Njodzi dzinongoitika dzoga